Trandraho Ireo Lahatsary Vaovao Ao Amin’ny Rising Voices · Global Voices teny Malagasy
Trandraho Ireo Lahatsary Vaovao Ao Amin'ny Rising Voices
Voadika ny 03 Febroary 2018 2:42 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Febroary taona 2008 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Efa nampiofana mpandray anjara tamin'ireo vondrom-piarahamonina tsy vosolotena araka ny tokony ho izy mikasika ny fomba fampiasàna fitaovam-pampitam-baovaon'olon-tsotra mandritra ny fito volana ny fihodinana voalohany amin'ny tetikasa Rising Voices. Mazava ho azy fa tamin'ny fanombohana, nanomboka tsimoramora ry zareo. Voalohany, nanangana ny bilaogin'izy ireo ny mpandray anjara tsirairay ary nianatra ny fomba fampifandraisana rohy amin'ny vaovao hafa ao amin'ny aterineto. Nitrandraka tsikelikely ny sary nomerika sy ny tranonkala fizarana sary tahaka ny Flickr avy eo ny tetikasa. Ankehitriny, maro amin'ireo tetikasa no mitondra ny fahaizan'izy ireo mamokatra media mankany amin'ny ambaratonga manaraka amin'ny fampiasana Windows Movie Maker mba hamokarana horonantsary fanadihadiana fohy mampiseho ny tena zava-misy iainan'ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo.
Mazava ho azy fa ireo horonantsary ireo dia lavitry ny famokaran'i Hollywood. Izany indrindra no mahatonga azy ireny ho sarobidy. Satria mampiseho ny fiainana araka ny tena izy, fa tsy araka izay tiantsika izy ireo. Azonao atao hatrany ny mijery ireo lahatsary efatra farany avy amin'ireo tetikasa Rising Voices ao amin'ny pejy voalohan'ny tranonkalanay. Ny lahatsary rehetra dia adika amin'ny teny Anglisy ary misy koa amin'ny fiteny hafa. Ohatra, ny La Receta avy amin'ny HiperBarrio dia efa misy amin'ny teny Bengali, Sinoa, Anglisy, Italiana, Portiogey ary Espaniôla. Azonao atao hatrany ny manampy anay handika ireo horonantsary rehetra amin'ny fiteny hafa mampiasa dotSUB. Raha hijery horonan-tsary miaraka amin'ny dikanteny, tsindrio fotsiny ny horonantsary izay milaza hoe “Fidio ny fiteny …” Mba hanampy amin'ny fandikana ny horonan-tsary amin'ny fiteny hafa izay tsy miseho ao amin'ny lisitra, tsindrio ny hoe “translate this video” na “handika ity lahatsary ity.”
Azo trohana amin'ny tenindrazan'izy ireo ankehitriny ny horonantsary, tsy ho ela dia ahitana dikantsoratra amin'ny teny Anglisy azo trohana ihany koa. Eo an-dalam-pamokarana ny pejy fitehirizana lahatsary manokana ihany koa izahay ary mampitombo ny haben'ny horonantsary mba ho mora vakiana kokoa ny dikantsoratra. Manantena izahay fa hanohy hanamarina ianao ary hampahafantatra anay ny lahatsary farany avy amin'ireo mpandray anjara ao amin'ny Rising Voices.
Rayones avy amin'i Jorge Jurado
“Rayones” adika amin'ny teny Anglisy hoe “tagging” (fanantonantsoratra), endrika manokan'ny graffiti izay anoratsoratana anarana, anaram-bositra, sy hafatra fohy eny amin'ny toeram-bahoaka sy amin'ny tranobe sy trano. Raha ny marina, rehefa mijery ity famokarana horonantsary avy amin'ny mpandray anjaran'ny HiperBarrio, Jorge Jurado ity isika, dia azo atao ny manao ny fanamarihana amin'ny hoditry ny olombelona. (Ary azo antoka fa tsy ny toerana andrasanao!). Ny lahatsarin'i Jorge dia fisaintsainana momba ny zavatra atao izay mahazatra ao La Loma, Colombia miaraka amin'ireo mpifanolo-bodirindrina sarangan'ny mpiasa hafa manerana izao tontolo izao. Fanimban-javatra sa endrika fanehoana manokana ny fanantonantsoratra?
Antsafa niarahana tamin'i Monwara Begum, avy amin'i Taslima Akhter
Taslima Akhter dia mpampiofana lahatsary bilaogy ao amin'ny Nari Jibon ao Dhaka, Bangladesh. Nandrakitra antsafa mahavaky fo niarahana tamin'i Monwara Begum izy, izay nanoritsoritra ny fanararaotana niaretany teo am-pelatanan'ny vadiny sy ny fianakaviany.
Banda Paniagua avy amin'i Dnabier Sady
Ny Tarika Paniagua avy amin'ny vondrom-piarahamonina manodidina an'i Medellin ao La Loma dia iray amin'ireo tarika mpihira malaza indrindra ao an-tanàna. Saingy rehefa mijery ity lahatsary fanadihadiana fohy nataon'i Dnabier Sady avy amin'ny HiperBarrio ity ianao, tsy dia nahare firy momba ny fianakavian'ny vondrona, izay niaritra taranaka dimy.
Saontinany kely amin'ny lahatsary efa novokarin'ny tetikasa Rising Voices ity. Amin'ny herinandro ho avy, dia hisy lahatsary maromaro avy amin'ny Voces Bolivianas, HiperBarrio, ary antenaina fa avy amin'ny tetikasa hafa koa. Aza miala!!
1 andro izayEl Salvador
4 andro izayEl Salvador
Mitolona hanana zo ho afaka mifidy ireo pelaka any Salvadaoro
1 herinandro izayMeksika
Mey 2021 13 Lahatsoratra